Zapiet: Gonesa Kununura uye Chitoro Chekutora ne Shopify | Martech Zone
Zapiet: Gonesa Kununura uye Chitoro Kutora neShopify
Mugovera, Kubvumbi 4, 2020 Mugovera, Kubvumbi 4, 2020 Douglas Karr
Iine nyika dzakazviparadzanisa nekupararira kwe COVID-19, makambani ari kunetsekana kuti vashandi vavo vashande, mikova yavo yakavhurika, uye vawane raramo. Kwemwedzi mishoma yapfuura, ndanga ndichibatsira a purazi remuno richiendesa nyama kuIndipolis navo Shopify kuisirwa. Ivo vaive nevanoverengeka vevatengesi vakaunganidza iyo system pamberi pangu ndichiuya mubhodhi uye ini ndanga ndichishanda kusimbisa kubatanidza nekugadzirisa pakasvika denda.
Iyo purazi ikozvino iri kushanda siku nesikati kuenderana nezvinodiwa, uye nayo yanga iri yangu rutsigiro rwevatengi vekupedzisira pamwe nevashandi. Vakanga vasina chero hunyanzvi hwekubatsira uye paive nezvakawanda zvekubatanidzwa kwemaoko. Nekudaro, kumwe kuratidzira kwekumisikidza kwavo Shopify yaive application yakavakwa ne Zapiet yeChitoro Kutora uye Kuendesa.
Zapiet Chitoro Kutora + Dhirivhari
Neapp yavo, ini ndakakwanisa kugadzira zvakasiyana kodhi yepositi yakavakirwa nzvimbo iyo yakatarwa nguva yekugadzirira uye mazuva ekuendesa. Isu takakwanisa zvakare kuwedzera nzvimbo dzechitoro kune vatengi kuti vatore zvakananga maodha avo. Nguva dzekugadzirira dzinoita kuti vashandi vawane nguva yekuunganidza maodha, kurodha, nekuvaendesa kana kuita kuti vatore. Mune ino kesi yemutengi, ivo vaive nemauto avo ekuendesa. Iyo app inosangana nemamwe masevhisi ekuendesa, zvakare, zvakadaro.
Iko kusanganiswa neiyo Shopify ngoro haina musono, ichibvumira mutengi kusarudza kuendesa kana kuchengeta piki. Kana iri kuendesa, iwo makodhi epositi kana zipi anosimbiswa senzvimbo iyo yakaunzwa uye uye anosarudza zuva anopiwa kuti asarudze yakakodzera dhirivhari zuva. Kana iri yekutora chitoro, unogona kuwana chitoro chepedyo. Kana iwe uchingova nenzvimbo imwe chete, iwe unongosarudza paunenge uchida kutora odha. Hezvino izvo zvinoita senge pane yangu mutengi saiti:
Chikamu chinyorwa: Kana iwe uri pakati peIndiana uye uchida kuyedza Tyner Pond Farm kuendeswa kumba, heino a 10% dhisikaundi pane yako yekutanga odha!
Zapiet's Shopify App yakabudirira zvekuti timu yavo yekutsigira yakati vawedzera zvitoro zvinopfuura chiuru panguva yedambudziko iri. Chikwata chiripo chiri kushanda siku nesikati kubatsira vatengi vacho vari mubhodhi uye kugadzirisa yavo app.
Iyo app inoshanduka zvinoshamisa. Pataida kuvhara chitoro, chaive nyore sekuchidzima muapp uye tinogona kugara tichichigonesa kana dambudziko rapera. Isu takagonesawo yakanaka meseji bar inouya neapp, ichigonesa vashanyi vatsva kutarisa kuti tione kana tichiendesa kune yavo zip kodhi.
Zvimiro zvechitoro Kutora + Dhirivhari Sanganisira
Chigadzirwa kuwanikwa - Maka zvigadzirwa zvega pazvinongowanikwa pakutora, kuendesa kana kutumira.
Shopify POS kusangana - Wona, gadzirisa uye kuronga yako yekutora uye yekuendesa maodha mu-chitoro.
Nzvimbo yakawanda yekuverenga - Bvumirana uye uratidze vatengi kurarama kuwanikwa munzvimbo dzese.
Kutonga kweodha - Tarisa pakatarisa kuti ndeapi maodha anoda kugadzirira chero rakapihwa zuva kana chokubuda.
Kubiridzira - Chengeta maodha ako awedzere kuchengetedzeka kubva mukubiridzira nekushandisa Anwendung Security Code chimiro.
Nzvimbo dzisina kuyerwa - Nyore kupinza nzvimbo dzako dzese uye gadzirisa ivo pachavo.
Yakakura customizability - Tsanangura kuwanikwa, mabhureki, mabhenefiti, otomatiki, mitemo uye nezvimwe.
Zuva neanotora nguva - Gadza nzvimbo uye kuwanikwa kwechigadzirwa pasi kusvika pamaminitsi mashanu-maminetsi uye rega vatengi vasarudze.
Inoenderana zvizere - Sangana neDeliv, Quiqup, Intuitive Shipping, Bespoke Shipping, Yepamberi Kutumira Mitemo uye zvimwe. Ona zvese Kubatanidzwa kweZapiet.
Dhavhidha odha rutsigiro - Chinja aripo madhairekitori muepiki kana kuendesa odha
Dhirivhari slots - Dzivisa zvakawandisa nekudzora huwandu hwekutakura mune chero yakapihwa nguva nguva.
Geodistance kusimbiswa - Inopa otomatiki mutengo wakakodzera uye sevhisi zvichienderana nenzvimbo yemutengi.
Uye, kana iwe uchida kugadzirisa yako yekuendesa mareti, Zapiet zvakare ine app ye Dhirivhari Mitengo neKure or Dhirivhari Mitengo neZip Code. Zapiet inopa yemazuva gumi nemana kuyedzwa kwemahara, kuti iwe ugone kutarisa kuti app inokodzera kufamba kwako uye woita zvaunoda. Kanzura mukati menguva iyoyo uye hauzobhadhariswa.
Isa Zapiet Chitoro Nzvimbo + Dhirivhari
Tags: kuendesa appecommerce kumba kuendesaecommerce chitoro kutorashopifyShopify chitoro chekutoraTyner Pond purazi
Lexio: Chinja Dhata muRudzi rweMutauro
TaxJar Inotangisa Emmet: Kutengesa Mutero Artificial Intelligence